घरमै यसरी बनाउन सकिन्छ १३ थरी स्वादिलो र स्वास्थ्यवर्द्धक खाजा – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:५५
कोरोनाका कारण अहिले परिवारसँगै बस्ने समय मिलेको छ। परिवारसँग समय बिताउने, कुरा गर्ने, एकले अर्कालाई बुझ्ने मौका पनि हो यो समय।
परिवार सँगै हुँदा मीठो खुवाउने र खाने रहर हुन्छ। हामीले खाने खाना वा खाजा सधैं एकै किसिमको भए मन नपर्ने हुन सक्छ। बालबालिकालाई पनि एकै खाले खाजा दिँदा मन नपराउन र नखान सक्छन्।
व्यस्तताका कारण हामी प्रायः खाजामा तयारी तथा जंकफुड खान्छौं। पकाउन पनि सजिलो र समयको पनि बचत हुने भएकाले जंकफुड र तयारी खाजा बढी प्रयोग गरिन्छ। तर यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त हुँदैन।
त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी व्यस्त भएका बेला पनि छोटो समयमा घरकै ताजा खाजा खान सकिन्छ। घरमै खाजा बनाएर खाँदा हामी आफू पनि स्वस्थ रहन सक्छौं र परिवारलाई पनि स्वस्थ राख्न सक्छौं।
लाग्न सक्छ सधैंभरि के खाजा बनाउने? यसका लागि केही ठूलो मिहेनत गर्नै पर्दैन। हाम्रो वरपर स्वास्थ्यवर्द्धक खाजा बनाउन सकिने धेरै परिकार छन्। यसका लागि दैनिक खाने खाद्यान्न जस्तै चामल, मकै, भटमास, दाल, गेडागुडी, फापर, कोदो, ताजा हरिया सागसब्जी, फलफूल आदिमा ध्यान दिए पुग्छ।
यी हाम्रो वरिपरि भएका खाद्यान्न मिलाएर खाना वा खाजा खान जाने हामी स्वस्थ हुन सक्छौं।
प्राचीनकालदेखि थाहा भएको कुरा हो, जीवन निर्वाह गर्न र स्वस्थ रहन अन्न, ताजा सागसब्जी र काँचो सलाद फलफूल चाहिन्छ। त्यसैले खाना होस् वा खाजा, यी तीनै चिज मिलाएर खान सकिन्छ। यी चिज सही तरिकाले के कति खाने भन्नेमा प्रकृतिप्रेमी निरोगधामले सजिलोसँग खान सकिने ‘तीन बराबर आहार सूत्र’ प्रस्तुत गरेको छ।
यसमा हामीले खाने गरेको अन्न एक भाग, हरिया ताजा तरकारी एक भाग र अन्त्यमा काँचो सलाद एक भागको बराबर मिश्रण। यसरी तीनथरी बराबर मिलाएर खाए हामी स्वस्थ रहन सक्छौं।
सम्भव भएसम्म खाजामा यी तीनथरि मिलाएर खानु स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ सागसब्जी थोरै भए काँचो सलाद र फलफूलको मात्रा बढाउन सकिन्छ। सलाद कम भए सागसब्जीको मात्रा बढाएर खान सकिन्छ। यसरी मिलाएर खाँदा पाचनलाई चाहिने रेशा, छोक्राबोक्रा सागसब्जी र सलादबाट प्रशस्त मिल्छ र कब्जियत हुँदैन। कब्जियत नरहेपछि मोटोपन लगायत अरू जीर्ण, दीर्घ रोग लाग्दैन।
हामी अहिले व्यस्त रहन्छौं, दौडधुप गर्छौं केका लागि? स्वस्थ, निरोग र आनन्दित रहेर जीवनलाई सही र सरल रूपमा अगाडी बढाउन। तर यसमा मुख्य भूमिका रहने खाना भने हामी अस्वस्थकर खाइरहेका हुन्छौं।
स्वस्थ रहे मात्र आफ्नो कर्यक्षमता बढ्छ। त्यसैले केही समय र केही कुरामा ध्यान दिन सके घरमै स्वास्थ्यवर्द्धक खाजा बनाएर खान सक्छौं।
सात दिनमा सातैथरि खान सकिने खाजाका परिकारहरूः
१. टुसा उम्रेका गेडागुडी र सलाद
टुसा उम्रेका गेडागुडी सामान्य गेडागुडीभन्दा धेरै पोषिलो र पचाउन सजिलो हुन्छ। माछा, मासु, अण्डाबाट प्राप्त हुने प्रोटिनभन्दा टुसा उम्रेका गेडागुडीबाट पाइने प्रोटिन स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। यसमा एसेन्सियल एमिनो एसिड पनि पाइन्छ। त्यसैले यसबाट पाइने प्रोटिन ‘पूर्ण प्रोटिन’ हुन्छ। यसलाई हामीले खाजाको रूपमा खान सक्छौं। सामान्यतयाः सबै गेडागुडीको टुसा उमार्न सकिन्छ।
टुसा उम्रार्ने तरिकाः चना, मुंग, मेथी जस्ता गेडागुडी सफा गरी पखाल्ने र रातभरी भिजाउने। त्यसपछि सफा कपडामा पोको पारेर राख्ने। गर्मीमा दुई दिनमै टुसा उम्रिन्छ भने जाडोमा ३ देखि ४ दिन लाग्छ। टुसा उम्रेका गेडागुडी काँचै र बफाएर खान सकिन्छ। यसमा केही प्याज, गोलभेँडा र इच्छाअनुसार कागती थोरै राख्न सकिन्छ। अन्तमा सलादस्वरुप स्याउ वा गाजर खाने।
यसरी खाँदा शरीरलाई चाहिने प्रोटिन मिल्छ र कब्जियत खुल्न मद्दत गर्छ। बिहानको नास्तामा पनि यो खाजा खान सकिन्छ।
ध्यान दिनु पर्ने कुराः युरिक एसिड, बाथ र सुन्निने, दुख्ने समस्या भएकाले टुसा उम्रेका गेडागुडी खानु हुँदैन। मकै, गहुँ आदि अन्नलाई टुसा उमारेर खान सकिन्छ।
२. भिजाइएको छोगडा, किसमिस र गाजर
ड्राई फ्रुट्स अर्थात सुकेका फलहरूलाई पचिपचाउ भोजन मानिन्छ। यसलाई शरीरले पचाउन धेरै शक्ति खर्च गर्नु पर्दैन।
विधिः छोकडा र किसमिसलाई सफा गरी पखाल्ने र रातभर पानीमा भिजाउने। भिजाएपछि यसमा रहेको गर्मीपन घट्छ। भिजाइएको छोकडा र किसमिस ठिक मात्रामा लिने र अन्तमा सलाद गाजर या स्याउ खाने। यसले कब्जियत खुलाउन मद्दत गर्छ। छोकडा-किसमिस भिजाएको पानी पिउन मिल्छ तर खाजासँगै नपिउने।
३. तरकारी सुप
तरकारी सुप सबभन्दा राम्रो खाजा हो। यसले शरीरलाई शक्ति दिन्छ र पेट पनि सफा हुन्छ।
विधिः सिमी, बोडी, साग, परवल, ब्रोकाउली, बन्दा जस्ता एक दुईथरि ताजा तरकारी सानो गरी काट्ने। अलिकति गाजर पनि मिसाउने। अब तरकारीमा कुकरमा राख्ने र आवश्यकताअनुसार पानी हाल्ने। आँटा, मकै, फापर जेको भए पनि एकदेखि दुई चम्चा पिठो हालेर कुकुरमा सिठ्ठी लगाउने। पाकेपछि हल्का नुन र जिरा राखेर खाने।
४. गाजरको हलुवा र तरकारी
हलुवा भन्ने बित्तिकै हामी चिनी राखेको मैदाको हलुवा सम्झन्छौं। तर चिनीबिना स्वास्थ्यवर्द्धक गाजरको हलुवा खान सकिन्छ।
विधिः गाजर राम्रोसँग ताछ्ने र मसिनो गरी घोट्ने। गुलियोका लागि सख्खर प्रयोग गर्ने। सख्खर पानीमा भिजाएर राख्ने। छोकडा, किसमिस ग्राइन्डिङ गरेर पनि राख्न सकिन्छ।
कराइमा आवश्यकताअनुसार सुजी भुट्ने। त्यसपछि पानी राखेर चलाउने। अब गाजर, भिजाएको सख्खर, पेस्ट छोकडा राखेर एक छिन छोप्ने। गाजरको हलुवा तयार हुन्छ। चिनीको गुलियोभन्दा सख्खर र छोकडाको गुलियो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। हलुवासँग एक कचौरा हरियो तरकारी खाने। हलुवामा इच्छाअनुसार छोकडा, किसमिस, नरिवल आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
५. आँटाको चाउमिन र सलाद
अहिले बजारमा मैदाको मात्र होइन, आँटाको चाउमिन पनि पाइन्छ। मैदामा हाम्रो पाचनलाई चाहिने रेशा र छोक्राबोक्रा हुँदैन। त्यसैले आँटाको नुडल्स लिने।
विधिः नुडल्स पानीमा उसिन्ने। पाकेपछि पानी फाल्ने र नुडल्स एकछिन चिस्याउने। इच्छाअनुसार गाजर, बन्दा, हरियो सिमी जस्ता तरकारी लाम्चो गरी काट्ने। अब थोरै तेल राखेर नुडल्स भुट्ने र तरकारी पनि हाल्ने। मसला भने पाकेपछि मात्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ। नुडल्ससँग मौसम अनुसारका सलाद फलफूल खाने।
६. आँटाको भेज थुक्पा
हरिया तरकारी बन्दा, सिमी, बोडी, गाजर आदिलाई लाम्चो गरेर काट्ने र आवश्यकता अनुसार पानी राखेर उमाल्ने। त्यसपछि आँटाको नुडल्स तरकारीमा राखेर केही मिनेट उसिन्ने। चिल्लोरहित आँटाको नुड्ल्स तयार हुन्छ।
यसरी थुक्पा बनाउँदा २ देखि ३ भाग हरिया तरकारी र एक भाग नुडल्स राख्नु उपयुक्त हुन्छ। मसला भने पाकेपछि राख्नु बेस। मसलामा नुन, जिरा, लसुन र अदुवाको पेस्ट थोरै राख्ने।
७. निरोगधाम ब्राउन केक
अहिले बालबालिका केक भन्नेबित्तिकै लोभिन्छन्। बजारमा पाइने केक धेरै क्रिम भएका र बासी हुन सक्छन्। त्यसैले घरमै सजिलै स्वास्थ्यवर्द्धक केक बनाएर खान र खुवाउन सकिन्छ।
विधिः केक बनाउन मकैको पिठो, फापर, आँटा आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गुलियोका लागि सख्खर भिजाउने। छोकडा, किसमिस पनि पेस्ट बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। आँटाको पिठोलाई थोरै तेल र फुलाउनका लागि थोरै बेकिङ पाउडर राखेर मोल्ने। त्यसपछि भिजाएर राखेको सख्खरको झोल हालेर मोलेको पिठो राम्रोसँग चलाएर मिसाउने र लेदो बनाउने।
पिठोको लेदो धेरै पातलो र धेरै बाक्लो हुनु हुँदैन, ठिक्कको लेदो बनाउने। अब आधादेखि एक घण्टा लेदोलाई यसै छाड्ने। यसरी छाड्दा लेदो नरम हुन्छ। अब प्यानमा थोरै तेल राखेर केक पकाउने। आफ्नो शरीरको अवस्था हरेर काजु, पिस्ता, नरिवल आदि राखेर खान सकिन्छ।
अन्डा, चिनी र क्रिमबिनाको यो केक सामान्यतः सबैले खान मिल्छ। केकसँग हरियो तरकारी एक कचौरा र सलाद खाने।
८. आँटाको भेज मःम
मःम भन्नेबित्तिकै मासु राखेको सम्झने चलन छ। बजारमा मैदाको मःम बढी प्रख्यात छ। तर आँटाको भेज मःम घरमै बनाएर खान सकिन्छ।
विधिः आँटा मुछ्ने र गाजर, बन्दा, हरियो सिमी, हरियो वोडी आदि तरकारी सानो गरी काट्ने र हल्का मसला राखेर मोल्ने। अब मुछिएको पिठोभित्र तरकारी राखेर मःमको आकार दिने र बफाउने। अन्तमा सलाद स्याउ वा गाजर खाने।
९. भुटेको मिक्स मकै, तरकारी र सलाद
मकै, थोरै भटमास र बदाम भुट्ने। त्यसमा केही छोकडा, किसमिस र नरिवल सानो गरी काटेर मिसाउने। अब मिक्स मकैसँग झोलिलो हरियो तरकारी एक कचौरा र अन्तमा सलाद खाने।
१०. फापरको रोटी, तरकारी र सलाद
फापरको पिठोलाई ठिक्कको पेस्ट बनाउने। रोटी नटाँसियोस् भनेर तावामा थोरै तेल राख्ने। अब पिठोको पेस्ट राखेर पाँच मिनेट छोप्ने। रोटी पाक्छ। रोटीसँग तरकारी एक कचौरा र सलाद खाने। रोटीका लागि चामलको पिठो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
११. आलु परौठा, तरकारी र सलादः
हामी बाहिर चिल्लो, मसलेदार र मैदाको आलु परौठा खाने गर्छौं। घरमै आँटाको चिल्लोरहित आलु परौठा बनाएर खान सकिन्छ।
विधिः आलु उसिन्ने। आँटाको पिठो मुछ्ने। बन्दा, गाजर, हरियो सिमी आदि तरकारी मसिनो गरेर काटेर राख्ने र थोरै नुन, जिरा, लसुन र अदुवाको पेस्ट राखेर आलुमा मोल्ने र बाक्लो लेदो बनाउने। अब तयार भएको आलुको मसला पिठोको बीच राखेर रोटी बेल्ने। तावामा थोरै तेल राखेर परौठा पकाउने।
साथमा हरियो तरकारी र सलाद खाने। परौठा भारी खाजामा पर्छ।
१२. रोटी, तरकारी र सलाद
आँटाको रोटी बनाउने र रोटीसँग झोलिलो तरकारी एक कचौरा र अन्तमा सलाद खाने।
१३. चिउरा, तरकारी र सलाद
एक मुठ्ठी चिउरा, एक कचौरा तरकारी र अन्तमा सलाद खाने।
यस्तै धेरै परिकारका खाजा घरमै बनाएर खान सकिन्छ।
ध्यान दिनु पर्ने कुराः मकै, चिउरा, रोटी आदि सुख्खा हुने भएकाले टाउको दुख्ने, ग्यास या एसिडिटी समस्या भएकाले भने खानु हुँदैन। खानै परे झोलिलो तरकारीसँग डुबाएर मात्र खाने। त्यसैगरी तरकारीमा मरमसला, चिल्लो कम प्रयोग गर्ने।
अर्को ध्यान दिनु पर्ने कुरा तरकारीमा आलु कम र हरिया तरकारी बढी प्रयोग गर्ने।
सलादः गाजर, बन्दा, चुकन्दर, काक्रा, सलादपत्ता लगायत सबै फलफूल सलाद हुन्। तर केरा र आँपलाई भने सलादका रूपमा लिनु हुँदैन। केरा र आँपमा कार्वोहाइड्रेट बढी हुन्छ। बन्दा राम्रो सलादमा पर्छ तर हाड, जोर्नी दुख्ने, सुन्निने समस्या छ भने बन्दा, काक्रा खानु हुँदैन।
त्यसैगरी रुघा, खोकी, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, पिनास, दम, चिसो लाग्ने समस्या भएमा सलाद खानु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तरकारीकै मात्रा बढाउने। खानै परे उसिनेर मात्र खाने।
नोटः सामान्यतया हामी दिनमा तीन छाक खान्छौं। बिहान र बेलुकी खाना र दिउँसो खाजा। खाजा हल्का हुनु नै स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त हुन्छ। तौल बढी भएकाले दिउँसो खाजामा अन्न नखाई हल्का आहार जस्तै तरकारी सुप र फलफूल मात्र खानु उपयुक्त हुन्छ। यसले तौल बढ्न दिँदैन र बढी भएको तौल घट्न पनि सहयोग गर्छ।
अन्न खानै परे पनि कम खाने। तर शारिरीक परिश्रम बढी गर्नेले भने आफ्नो परिश्रम र शरीरको अवस्था हेरेर खाजा मिलाएर खान सकिन्छ। यसरी मिलाएर खाएमा कब्जियत, मोटोपन हुँदैन र स्वस्थ रहन सकिन्छ।